Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 30/10/2020)
A isitimela ukuthi yethulwe abahambi ezweni isitimela nokubukisa emuva 1982 isitimela efanayo lokho namanje ukukhetha inombolo eyodwa kwabaningi iYurophu ngezebhizinisi futhi Izitimela Zikanokusho abalandeli. Ngakho, kunoma ngubani obheka ukujabulela ukunethezeka kwesitimela okungenakuqhathaniswa, Venice Simplon Orient Express indlela yokukwenza. Abaningi uhambo abadumile ka lo phunyuka zikanokusho esiphakathi eLondon Venice. Nokho, abaningi abakwazi ukumelana uya okwengeziwe ukuze Istanbul nase-Berlin, nge Berlin kokuba zokugcina stop umkhankaso isitimela. Lapho uhamba ngalesi sitimela, unazo labapheki engcono emhlabeni abasebenza ukudla kwakho futhi Suites olulodwa futhi wabelane ukuthi kukhona 5-star impahla.
A isitimela ophila ngempela kuze kube namasiko bobukhosi, Belmond Royal ngoSelkirk is kufezeka iphupho. Ukuba phakathi phezulu 3 izitimela zikanokusho, Belmond uye evumelanisiwe imizila ozokuthanda. Lezi zihlanganisa Scotch Malt Whisky Inqola, Wonders Western Scenic, Scotland sika Classic Splendours, Dales Lakes & Gardens, nokuningi okuningi. Belmond uqhosha amasevisi spa, kanjalo! Usuku-4 Highland Classicmost kuyinto ukuvakasha ethandwa kakhulu. Isitimela esiqala April kuya ku-October, basibekele eziningi ngokuphelele langa namathafa ebabazekayo, kuhlanganise Isle of Skye. Hlala ukhululeke futhi unethezeke yi omkhulu amafasitela ahlotshiswe ngokweqile, ukuphuza kwezinye iwayini engcono futhi gush phezu wobuhle Scotland.
A evakashele eYurophu zihlanganisa Izitimela Zikanokusho futhi ejabule ilungelo lalo kakade, kodwa evakashele eYurophu, ngo iyiphi yalezi izitimela kuyinto KONKE. Thenga ithikithi for a ride iyiphi isitimela ngisho kusukela iphuzu ukuze ukhombe nge Londoloza Isitimela futhi uqale ukujabulela Europe.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma unga lapha: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/europe-luxurious-trains/ - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)